Mooryaannimada ayaa dhaanta dulmi dawladeed! | KEYDMEDIA ENGLISH
Wiil mooryaan isbaaro u taallo, oo dadka qori caaraddii ku baarta, marka meel ama magaalo lagu sheego dadka dhan ayaa cay, halgaad iyo habaar isugu geeya, oo gar iyo garasho ah, balse, marka wiil kale uu tuute dawladeed ama darajadeed dad ku dulmiyo qofna ma hadlo, mararka qaar qofkii hadla ayaaba lagu yiraa; dawlad-diid ayaad tahay mooryaannimo raba; Alle idin ku dhaarin maayee, saa Alle iyo iimaankii la idinka ka waaye, ee inta maankiinna adeegsataan; labadaa kee MOORYAAN ah?.
Labo dhacdo oo toddobaadkan taagan aan kuugu tusaaleeyo marka laga soo tago, in siyaasiyiin iyo waxgarad kale, oo ay madaxweynayaal ugu horreeyaan ISBAARO loogu dhigtay garoonka Aadan Cadde dhexdiisa, ayna sii dheer tahay qolo ku duulka iyo isku dirka beelaha.
Hooyo Layla Cismaan Xasan waa ku dhawaad 80jir, wiil ay dhashay, welibana ciidanka ka tirsan uu teer iyo 2017 ka xiran yahay kuna jiro xabsi dawladeed. Dambi kasta oo uu galay wiilkeeda dhibka haysta, xaggee MOORYAANNIMADU kaga jirtaa? Kuwa iimaanlaawayaal ah oo askar ku sheeggan oo ka shaqeeya xabsiga, ayaa hooyadaa weliba danyar in ay tahay ka sokow, xoogsata ah, mar walba oo ay rabto, in ay wiilkeeda booqato waxay ka BAARTAAN shilimaadkii ay xamaaliga ku soo heshay!
Xogta oo uu soo tebiyey Xuseen Sabriye, oon dhab ahaantii in aan ku mahdinayo ka sokow, aan ku bogaadinayo dadnimadiisa iyo duntiisa wanaagsan, ayaa markii ay baraha bulshada qabsatay waxaa hooyadaa booqday wasiirka CADDAALADDA; istaaqfurallaahi! Tubti toobo!
Dhacddada kale waxay qusaysaa HALGANTO Deeqo SOOMAALI, oo in mid fatashaari wata uu xabbadeeyey, weliba xabbad afgelis eheed, oo teeda ayaan geline dilid oo kale eheed, haddana, xarig loogu daray, ayaa haddana, baasaboorkeeda oo ay fiisa uga dalban rabtay safaaradda Turkiga waxaa baaaboorkeedii safaaradda ka soo BOOBAY Taliye Saldhig degmo!
Ogow, meel xeer ka jiro qofka waxaa safar u diidi kara ama aqoonsiysadiisa ka xannibi kara GARSOORE, haddana, qof aanba dambi aan ka ahayn, in uu bannaanbaxay aan gelin ka warran MOORYAANKA awood dawladeed ku baacsanaya, sow ma ahan; Mooryaannimada ayaa dhaanta dulmi dawladeed?!
Kaaga darane, labada dhacdo waxay ku wada saabsan yihiin dadkii bulshada ugu nugulaa oo dumarka ah, oo Soomaalidu turid iyo dhimrin sharfid ka sokow ay u la heellanaayeen, haddaba, dadkii xuquuqda aadaha, siiba tan dumarka u doodayey aawaye; maa ka hadlaan, maxaa afka haysta?.
MOORYAAN qabiil dad looga dacwoodo iyo mararka qaar damiirceliya ayuu lahaaye, MOORYAAN dawladeed yaa looga dacwoodaa, aan xeerqabta iyo damiirceliya midna aan lahayn? Waa dhibka jira iyo dhimaalka taagan!
Mooryaan beeleedku ma lahayn mana lahan awood naga dhaxaysa oo uu kugu dulmiyo, balse, mooryaan dawladeedku wuxuu kugu dulmiyaa awood aan wada leenahay, oo dawladda ah, haddana, aan xidaab daba ool.
Ayaandarrada weyn ee Muqdisho ka jirta waxay tahay, in dulmigaa magaca dawladeed lagu galayo la wada daawanayo, haddana qof walbaa leeyahay; dawladnimadu waa in aysan burburin, oo kaalaya; sidee ku sii dhisnaa kartaaa dawlad leh dhaqammadii MOORYAANNIMADA, weliba ka dhaqan xun MOORYAANKA?.
Gunnimada la qaayibayo qaladkeeda ma lahan gocorrada iyo gafanayaasha gaboodfallada gaysanaya, ee waxaa qaladka leh kuwa bulshadan madaxdeeda iska dhigaya ama isu haysta, ee dhaqanku ugu horreeyo siyaasiguna ugu faradhuuban yahay.
Mooryaan awood dawladeed ku takrifalaba la arkee, mooryaan qabiil i qarso iyo janno ayuu noqdaa!
Si aan nacab duran
Duubka ugu gefin
Say u ka la didin
Si aysan u dumin
Dulmi ha ka gelin
Inta doqon diran
Diidnay baa roon